သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: တစ်စစီ
ငါ့ရင်တွေ အက်ကွဲနေတယ်၊ ကြေမွနေတယ်။
ငါပေးသမျှ၊ လှုသမျှလဲ ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်
တည်ငြိမ်စွာ ပြသနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊
အနာဂတ်ကို မျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊
ငါကိုယ်တိုင်လဲ ထွက်ပြေးလောက်ဖို့ပဲ အားသန်နေတယ်လေ။
ရသာ ရာမျိုး ရွေးနိုင်တဲ့ အစားအိုးတွေ၊
သုံးထပ်၊ နှစ်ထပ်၊ ထပ်တရာ နှုးအိတဲ့
ပေါလွန်းလို့ လွှင့်ပစ်နေရတဲ့ စာစရာဗုံးတွေ၊
အရင်ကတော့ မင်းတို့တွေ မုန်းတီးလှချည်ရဲ့လို့ကြွေးကြော်
မင်းတို့ ပညာတွေ ထက်မြက်စွာ တတ်လာကြပြီပဲ။
မွဲတေဆင်းရဲ၊ စုတ်ပြတ်လို့ အားအင်ကုန်ခမ်း
မင်းတို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားက ရလာတဲ့ပညာတွေ၊ ရှိလာမယ့်အာဏာတွေနဲ့
အောက်ဆုံးက လိုအင်ကိုတောင် မဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြသေးတဲ့ဘ၀
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:45 PM
မလေးရေ … ဒီကဗျာလေးကို သူတို့ တွေ ဖတ်မိပါစေလို့… သူတို့ လို အခွင့်အရေးမရတဲ့ လေးမ က ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်….။
ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး သက်ပြင်းပဲချမိတယ်။ လေးမ ပြောသလို ... သူတို့ဖတ်မိပြီး နားလည် သဘောပေါက်ကြရင် သိပ်ကောင်းမယ်။
:(( sigh .. i feel the same way too sis .. It's so melancholic ..
I've cried on one of their national day coz couldn't bear the feeling of how miserable our ppl are while others are joyous and celebrating their national day.
အချိန်ကာလတစ်ခုကြာအောင် အိုးမဲသုတ်ခံထားရတဲ့ ကြက်ကလေးတွေ ဘ၀ အိမ်ကြက်ချင်းတွေတဲ့အခါ ကိုကကောင်းကောင်း နားလည်ပေမယ့် မျှက်နှာပေါ်က အိုးမဲကြောင့် အမုန်းခံနေရသူတွေပါ။
ဖတ်လို့ ကောင်း၊ ခံစားလို့ရတဲ့ ကဗျာ တခုပါ။
ကျနော် အခုတလော စိတ်တိုနေရတာ များနေတာဗျာ…။ အခု တပြည်သူ ရေးထားတဲ့ ကဗျာကို ဖတ်မိတော့ တခုခုကို ခံပြင်းလာသလို ပိုခံစားရတယ်။ ပညာတွေသင်ပြီး စာတတ်လာတာ ကိုယ့်လူအချင်းချင်း စနစ်တကျ နှိမ်နင်းဖို့တဲ့လား။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Maslow's Hierarchy of Needs ကို လက်တစ်ဆုပ်စာ တောင်မှ အပြည့်မရသေး..သူတို့ အတွက်ကပထမအဆင့်နဲ့ တင်လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပြီထင်နေပြီ… ပထမအဆင့် ဖြစ်တဲ့ စားဝတ်နေရေး၊နဲ့ စည်းစိမ်တော့မပူရပေမယ့်၊
ဒုတိယအဆင့် လုံခြုံ မှုမရှိ၊ ဘယ်အချိန်ပြည်သူထဆူမလဲရင်တမမ..ကျီးလန့် စာစားလို့ ..တတိယအဆင့်.ကြင်နာခြင်း၊စာနာခြင်း..ပျောက်ဆုံးနေတယ်...ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ပြည်သူတရပ်လုံးပထမအဆင့်ရဖို့ ဆို တာတော့အိမ်မက်တောင်မမက်နိုင်သေး....
မအိမ့်တိုက်တွန်းချက်တွေသူတို့နားလည်ကြပါစေ.....
“တစ်တစီ”ဆိုပြီ မလေး ခံစားချက်မုန်တိုင်း ထန်ထားတာတွေ့လို့ ကိုယ်က ဒီကွန်မင့်ကို အားပေးတဲ့ သဘောနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ ရေးတာထက် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မျှဝေချင်တာလည်း ပါပါတယ်။
ဟိုအရင် ကိုယ်တို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မန္တလေး အသင်းဆိုပြီး လုပ်ကြတုန်းက ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ကောက်နုတ်ပြီးထုတ်တယ်။ ဒါမျိုးလေးပေါ့
နေမင်း အကျဉ်း စကျတဲ့ ဖြစ်စဉ်
ဓါးနဲ့ ထိုး ဓါးကျိုး
လှံနဲ့ ထိုး လှံကျိုး
ဘယ်တော့မှ မသေတဲ့ အမျိုး
ကဗျာ ဆရာရဲ့ အလိုအရ အရင်တုံးက ဘာသာရေး ပညာရှင်တွေ ခံယူထားတဲ့ ကမ္ဘာကို နေက လည်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကော့ပါနိကပ် က မှားတယ်လို့ ပြောပြီး နေကို မလည်ခိုင်းတော့ဘူးပေါ့။ ဒါဟာ အမှန်တရားဆိုတာ နောက်လူတွေ သိလာကြတယ်၊ လက်ခံလာကြတယ်လေ။ ကော့ပါနိကပ်ကို သတ်လိုက်ပေမယ့် အမှန်တရားဟာ ဘယ်တော့မှ သေဆုံးမသွားခဲ့ဘူးပေါ့။
ကဗျာလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းတန်ဘိုးရှိပါတယ်၊၊